၂၁ရာစုမှာ အလုပ်လုပ်သူများ ပိုမိုများပြားလာသည်။ ခေတ်မီတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ကမ္ဘာမြေကြီး၏တောင်းဆိုချက်အရ၊ ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်းများ၏ ဆွဲဆောင်ချက်များအရ လူသားတွေရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒများကလည်း ပိုမိုများပြားကြီးထွားလာသည်။ လိုအင်ဆန္ဒများများပြာလာသည်နှင့်အမျှ လုပ်ငန်းခွင်တွင် မပျော်ပိုက်ခြင်း၊ ငြိးငွေ့ခြင်း၊ စိတ်ပျက်ခြင်း အစရှိသည့်ပြဿနာများရှိလာကြသည်။ ထိုထိုပြဿနာများအတွက် နယူးယောက်တိုင်းမှ Phyllis Korkki က “ What to do About Wanderlust” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် တင်ပြဆွေးနွေးထားသည်။
သင်က အလုပ်မှာနေသားတကျှရှိနေသလို ၀င်ငွေလည်းကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်မှာလိုအင်ဆန္ဒများနေတယ်။ အခြားမတူတဲ့နယ်ပယ် အလုပ်သစ်ကိုပြောင်းချင်နေတယ်။ အဲဒီလိုအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ စဉ်းစားသင့်သလား?
ဖြေ။ အခြေအနေကောင်းတဲ့အလုပ်က နောက်ထပ်အလုပ်ပြောင်းဖို့ဆိုတာ ငွေကြေးအတွက်ရော အလုပ်အတွက်ပါ အခက်အခဲ၊စွန့်စားမှု့အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ ထိုက်တန်သောပြောင်းလဲမှု့ပါပဲ။
အခုလိုအပြောင်းအလဲက ထိုက်တန်တယ်လို့ ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲ?
ဖြေ။ အဆင်မပြေမှု့များကနေ ထွက်ပြေးရှောင်ပုန်းတာထက်စာရင် များသောအားဖြင့် သင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ ပြောင်းလဲထိုက်တယ်လို့ Challenger Gray& Christmas, the outplacement firm မှ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဂျွန်အေ ကဆိုပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် ပန်းချီပြခန်းဖွင့်ဖို့ စိတ်ကူးယဉ်နေခဲ့ သင့်စိတ်ကူး (သို့မဟုတ်) ဗွီဒီယိုဂိမ်းတွေမှာ ဒီဇိုင်နာကောင်း ဖြစ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ သင့်ယုံကြည်ချက်ကို ပြန်သုံးသပ်ဖိုိ့လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှန်တကယ်ပင် တရားရေးရာလုပ်ငန်း၊ စာရင်းအင်းအလုပ်မှာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ငြိးငွေ့ပင်ပန်းစိတ်ပျက်နေရင်တော့ အလုပ်ပြောင်းခြင်းက မှန်ကန်သောအဖြေ၊ထွက်ပေါက်မဟုတ်ပါ။ များသောအားဖြင့် လူအများစုက အလုပ်တွင် မပျော်ရွှင် အဆင်မပြေခြင်းကို ၎င်းတို့လုပ်သော အလုပ်ကုမ္ပဏီထက် မိမိတို့ ရွေးချယ်လုပ်ကိုင်သော အသက်မွေးဝမ်းအလုပ်ကိုသာ အပြစ်တင်တတ်ကြသည်ဟု Mr Challenger ကပြောပါသည်။ မိမိလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုပဲ အခြားကုမ္ပဏီများတွင်ပြောင်းလဲလုပ်ခြင်းက အခက်အခဲ၊စွန့်စားမှုများ အများကြီးသက်သာသွားနိုင်မည်။
ဖြေ။ ရတာပေါ့။ ဟုတ်တယ်။အဲဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်။ သင်လုပ်ချင်တဲ့နောက်ထပ်အလုပ်သစ်ဆိုတာက အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသေးတာမဟုတ်၊ အဆိုးအကောင်းကို မသိနိုင်သေးပါ။ လက်ရှိအလုပ်က သင့်အတွက်ဘာမှပူစရာမလိုပါ။ ဒါ့ကြောင့် တိုးချဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေလုပ်ချင်တယ်၊ အလုပ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာနမှာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ ဥပမာ hardware ပိုင်းလုပ်နေသူက softwareပိုင်းကိုပြောင်းချင်တယ် (သို့မဟုတ်) ထုတ်ကုန်ပိုင်းလုပ်သူက အရောင်းအလုပ်ကို ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်ကို အချိန်ပိုင်းတာဝန်ယူနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းတတ်ကျွမ်းကာ ပညာရပ်များလည်းလေ့လာနိုင်မည်။ လုပ်ငန်းခွင်မှ လူတစ်ယောက်ဟာ စူးစမ်းလေ့လာတတ်ခြင်းဖြင့် နောက်ထပ် အလုပ် လမ်းကြောင်းများရှိလာနိုင်သည်။ ဒါက အခြားအလုပ်ကုမ္ပဏီကိုခုန်ကူးပြောင်းရမလား မပြောင်းဘူးလား ဆိုတာထက် စဉ်းစားရတာပိုလွယ်ပါသည်။ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ဟာ မိမိလုပ်တဲ့အလုပ်မှာပဲ အခြားဌာနကိုပြောင်းလုပ်ခြင်းက အမှန်တကယ်ပင် အခက်အခဲများ အများကြီး နည်းပါးသက်သာသွားမည်။ Ms Bing က တခါတရံမှာ ၀န်ထမ်းတွေဟာ အလုပ်သစ်ကိုရွေ့သွားတယ်။ နောက်စိတ်ပြောင်းပြီး အလုပ်ကလက်ခံသေးတယ်ဆိုရင် သူတို့နေရာကို ပြန်ရောက်ကြတယ်။
ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာ မလုပ်ရင် ဘယ်လိုအကျိုးဆက်ရှိနိုင်ပါသလဲ?
အလုပ်အားရက်၊နားချိန်မှာသင်စိတ်ဝင်စားသော ကုမ္ပဏီကို သင့်ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှု့ကို အခငွေကြေးမယူပဲ(သို့မဟုတ်)နည်းနည်းပါးပါးသာ ယူပြီး အလုပ်တောင်းပါ။ ဒါက ရက်သတ္တပတ်များမှ အချိန်အနည်းငယ်သာပေးရပါသည်။ တစ်ချို့လူများက အလုပ်ဖိအားကြောင့် ဒါကို စဉ်းစားဖို့ နှောင်းနှေးနေမည်။ စီးပွားရေးသမားများသည် ပိုက်ဆံနည်းနည်း ၊ အလကားသက်သက် ရခြင်းအတွက် ၀မ်းပန်းတသာဖြစ်မှာပါ။ Julie Jansen (a career coach and consultant based in Stamford Conn )က ဆိုထားသည်။ ဥပမာ သူမရဲ့ ဖောက်သည်များထဲမှ တစ်ဦးဟာ ပရိဘောကပစ္စည်းများ အလှဆင်ခြင်းအလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ နောက်တော့ အဲဒီဝန်ဆောင်မှုကို ကုမ္ပဏီိကို ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ယခုလက်ရှိသင်ဘာတွေပဲလုပ်လုပ် အစည်းအဝေးတွေ၊ ကုန်စည်ပြပွဲများကိုတက်ရောက်ပြီး သုတေသနလုပ်ပါ။ ကျောင်းတုန်းက အတန်းဖော်တွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မပြတ်စေပါနဲ့။ အချက်အလက်ပါတဲ့ အင်တာဗျုးများလုပ်ဖို့ကိုလည်းကြောက်မနေပါနဲ့။
ကြီးကျယ်ခန်းနားတဲ့အသက်မွေးကြောင်းအလုပ်ကိုလုပ်ချင်ရင် ငွေကိုထည့်ထွက်လို့မရဘူးပေါ့ ?
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စစချင်းကတော့ သေချာပါတယ်။ သင့်အလုပ် နယ်ပယ်ကနေ ထွက်မယ် နောက်ပြီးကျွမ်းကျင်အဆင့် ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ငွေများများလိုချင်လို့တော့မဖြစ်နိုင်ပါလို့ Mr Challenger က ပြောသည်။ ဒါ့ကြောင့် အပြောင်းအလဲမလုပ်ခင် သင့်ရဲ့အသုံးစရိတ်နှင့်ချွေတာရေးနည်းလမ်းကို ကျင့်သုံး တွက်ချက်ရမည်။ အစီအစဉ်များကို မိသားစုများနဲ့တိုင်ပင်ရမည်။ ရွေးချယ်တဲ့ အလုပ်သစ်နယ်သစ်အတွက် နောက်ထပ်ပညာရပ်များ သင်တန်းလက်မှတ်များကလည်းပိုအရေးကြီးပါသည်။
အလုပ်သစ်ကို ၁၈လလောက်လုပ်ပြီးရင်တော့ အကဲဖြတ်လို့ရပါပြီ။ Chuck Wardell (Managing Director for the Northeast region for Kor/Ferry International, the executive search firm) မှ အကြံဥာဏ်ပေးသည်။ ဒီနေရာမှာ အလုပ်ဟောင်းကိုပြန်သွားရင်အဆ်ေပြေပါတယ်၊သင့် လက်စလက်နတော့ကျန်သေးတာကြောင့်ပါ။ နှစ်ခွဲလောက် ၃နှစ်လောက်လုပ်ပြီးတာနဲ့ အတပ်ပြောနိုင်ပါပြီ။ သင်အမှားလုပ်လိုက်တယ် အထူးသဖြင့် အသက်ကြီးလာတာမျုိုးပေါ့။ သင့်ဘ၀ရဲ့အရေးပါသော နှစ်ကာလတွေကို သုံးပစ်လိုက်တာမျိုး ဒါဟာ ကောင်းသောအနေအထားမဟုတ်ပါ။ ဒါ့ကြောင့်ကြိုတင်၍ သုတေသနပြုလေ့လာခြင်းက ကြီးမားသောအမှားကို ရှောင်ရှာရန် နည်းလမ်းကောင်းဖြစ်ပါသည်။နောက်တစ်ခုက လုပ်ငန်းအသစ်အတွက် ကျွမ်းကျင်မှု ကိုယ့်မှာ ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုလည်း သိနားလည်ထားရမည်။ ဒါကတော့ Steven Harrisonရဲ့ အကြံပေးချက်ဖြစ်ပါသည်။ သူက ပင်လယ်လေ့လာရေးသမားအလုပ်ကနေ 3D games developing ကုမ္ပဏီကိုပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ အသက်၃၂ ရှိသူ Mr Steven Harrison က သူ ယခင်အလုပ် ပင်လယ်လေ့လာရေးလုပ်ငန်းမှာ သင်္ချာကိုကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးချလေ့လာနိုင်ခဲ့တာကြောင့် အလုပ်သစ်အိုင်တီလုပ်ငန်းမှာ နည်းပညာနဲ့သင်္ချာနဲ့လုပ်ရတဲ့ အလုပ်ကို အချိန်ပိုင်း အရင် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ အလုပ်ဟောင်းက ကျွမ်းကျင်မှုကို အလုပ်သစ်ကိုသယ်သွားနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ အလုပ်ပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက် ကျေနပ်တယ်။ပျော်တယ်။ နောက်ထပ် အပြောင်းအလဲတွေ ရှိလာရင်လည်း လုပ်အုံးမယ်လို့ စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တကယ်လို့ ပြောင်းလဲမှုမှာရှိနေတဲ့အခက်အခဲတွေကို သင် လွှမ်းမိုးအနိုင်ယူနိုင်သရွေ့ အလုပ်မှာ ပေါ်လာတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ သင်ရယူနိုင်ပါတယ်တဲ့.( Ref:nytimes.com)
Posted by Alex Aung at 2:06 PM